Vaovao - Ahoana ny fisafidianana borosy fiharatana mety aminao?
Misy karazana borosy an-jatony eny an-tsena, ny iray mora indrindra dia 30, ary ny vidiny dia roa ka hatramin'ny telo arivo na avo kokoa aza. Toy izany koa ny borosy, inona no mahasamihafa azy? Ilaina ve ny mandany dolara an'arivony amin'ny borosy iray mandritra ny 1 minitra fohy isan'andro? Sa afaka mividy amina am-polony yuan vitsivitsy ny olona iray mba hanana ny vokany mitovy?
Betsaka ny fahalalana momba ny borosy fiharatana, andao hiara-hijery azy anio, andao hampiasa ny fanandramana nataontsika manokana hiresahana izany!
Amin'ny fizotra mando mando, ny tena andraikitry ny borosy dia ny mametaka, misosoka ary mihosotra amin'ny tarehy. Ireto dingana roa ireto koa dia ampahany amin'ny fahafinaretana mandritra ny fizotra fiharatana.
Ny borosy dia afaka manampy anao mamorona sombin-javatra manify sy matevina avy amin'ny crème na savony fiharatana mba handrakofana tanteraka ny volombavanao.
Ny borosy dia manampy amin'ny fanalefena ny volombava ary mampamando ny hoditra, hisorohana ny fahasosorana amin'ny hareza sy fahasimbana amin'ny hoditra rehefa tsy mandomando ny hoditra. Ny fahamendrehan'ny borosy dia afaka miditra ao anaty mason-koditra sy loto madio ary mitondra fahatsapana mamelombelona anao. Ny tsara na ny ratsy amin'ny borosy fiharatana dia afaka mitondra fahatsapana samy hafa eo amin'ny lanitra sy ny tany.
Amin'izao fotoana izao, ny borosy eny an-tsena dia mizara telo matetika: volo synthetic fibre, volom-boalambo, volo badger
Volo sentetika vita amin'ny nofo, mety ho an'ny lehilahy tsy mahazaka volo biby na mpiaro biby.
volo synthetic volo mizara ho tsara sy ratsy. Ny volo sentetika tsy dia manara-penitra dia somary mafy ary tsy mahazaka rano mihinana mihitsy. Na dia miady mafy amin'ny fikoropahana ao anaty lovia aza ianao, dia sarotra ny manao foam. Ny tarehy ambony dia toy ny miborosy ny tarehy amin'ny kifafa, ary azonao atao ihany koa ny mahatsapa ny fanaintainan'ny totohondry.
■ Ny lokon'ny palitao dia nolokoana tamin'ny volo anti-badger, ary somary mafy ny volo.
■ Tombony: mora! Tsy misy tombony afa-tsy ny mora vidy.
■ Tombony: Sarotra ny mamoaka volo, ary tena maharary noho ny marary fo.
Inona no volo synthetic fibre tsara kokoa?
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia maoderina, ny volo synthetic volo dia nanomboka nanjary malefaka mitovy amin'ny volo badger, ary ny lokon'ny volo dia noloko koa mba hitovy amin'ny volon'ny badger, ary nihatsara koa ny fahafahan'ny rano mandray. Saingy mbola mitaky faharetana kely ihany ny blisten, afa-tsy ny lesoka tsy fahampian'ny rano. Satria malefaka toy ny volo mihombo izy dia mahatsiaro ho mahazo aina kokoa ny tarehy ambony, tsy misy fahatsapana manindrona. Raha tena tsy mahazaka volo biby ianao ary tia fiarovana biby, dia afaka misafidy volo sentetika tsara ianao hahatsapa izany.
Na volo synthetic fibre tsara na volo synthetic synthetic dia misy olana mahazatra, izany hoe hisy volo fohy sy volo very. Amin'ny ankapobeny dia asaina manolo iray ao anatin'ny herintaona.
■ Ny lokon'ny palitao dia nolokoana tamin'ny volo anti-badger, ary malefaka ny volo.
■ Tombony: malefaka avo.
■ Ny fatiantoka: ny fihoaran'ny rano malemy, ny fotoana maharitra mandritra ny fotoana maharitra ary ny fihenan'ny volo.
Ny borosy fiharatana vita amin'ny volom-boaloboka dia mety kokoa ho an'ny lehilahy izay vao manomboka milom-bolo. Ny volo dia somary mafy kokoa noho ny volo fibre sy badger, izay afaka manadio tsara ny hoditra. Ny fahaizan'ny hidin-drano amin'ny biby voajanahary dia manamora ny fisosohana.
Ho fanampin'ireo lesoka madinidinika tsy dia malefaka loatra, indraindray dia hisy fahatsapana maharary mifikitra amin'ny tarehy. Rehefa avy nampiasaina nandritra ny fotoana ela dia ho simba sy hisaraka tsikelikely ny volo.
■ Ny lokon'ny volo dia beige madio ary somary mafy ny volo.
■ Tombony: Ny volo biby dia manana fahaizana manidy rano voajanahary ary mora misosa.
■ Tombony: tsy dia malefaka izy io, ho simba ny volo ary hianjera ny volo.
Volo avy amin'ny faritra samihafa amin'ny biby "badger" no tena anaovana azy. Ity biby ity dia tsy hita afa-tsy any avaratra atsinanan'i Sina sy ny Alpes Eoropeanina eto an-tany. Satria tsy fahita sy sarobidy izy io, io no fifaliana mandroso indrindra izay tsy misy olona afaka maka tahaka amin'ny borosy.
Ny volo badger dia tena mifoka rano sy manidy rano amin'ny volo biby, izay tena mety amin'ny fanaratra borosy. Rano kely fotsiny dia afaka mamorona sombin-javatra manankarena sy marefo. Ny malefaka dia haavo vaovao ihany koa izay tsy tratra raha oharina amin'ny volon-kisoa sy ny volo sentetika. Mitondra fahatsapana fa tsy te hanova borosy hafa ianao aorian'ny fampiasanao azy.
Mazava ho azy, ny volo badger dia naoty ihany koa, ary ny faritra samihafa amin'ny volo dia samy hafa ny haavon'ny fahatsapana.
■ Ny loko voajanahary ny volo badger dia malefaka be.
■ Tombony: Fahaizana mihidy anaty rano, volo manankarena sy marefo, volo malefaka, mahazo aina amin'ny tarehy.
■ Tombony: vidiny lafo.
Volo badger madio:
Ny ankabeazan'ny vozona, ny soroka, ny sandry dia ampiasaina, ary ny volo anatiny tapaka dia somary mafy noho ny naoty hafa amin'ny volo badger. Mety kokoa ho an'ireo mpilalao te-hifandray amin'ny volo badger fotsiny izy io. Ity haavon'ny borosy fiharatana ity koa dia lafo kokoa.
Volo badger tsara indrindra:
Izy io dia vita amin'ny volo 20-30% malefaka kokoa amin'ny faritra samihafa amin'ny badger, izay ho malefaka sy ahazoana aina kokoa noho ny volo madio. Izy io dia mety ho an'ny mpilalao te-hanatsara ny sehatra hafa aorian'ny fikasihana ilay volon-doha volo.
Volo Super Badger:
Super badger dia volo badger izay lafo kokoa noho ny "tsara indrindra" na "madio". Izy io dia vita amin'ny 40-50% ny volo ao ambadiky ny badger. Ny tampony avo lenta dia fotsy fotsy kely. Matetika izy io dia ny tendrony vita amin'ny volon'ny volony "madio" avo lenta.
Volo volo Silvertip:
Ny volo badger ambony no volo badger ambony kalitao indrindra. Volo 100% amin'ny lamosina no anaovana azy. Ity ampahany amin'ny volo ity dia tsy dia fahita firy koa, ka somary ambony kokoa ny vidiny. Ny tampon'ny volo dia loko fotsy volomparasy voajanahary, malefaka be ny volo rehefa ampiasaina, saingy tsy very ny elastika. Any Eropa, manan-kaja maro sy mpivarotra manankarena no hisafidy borosy ambony hanasongadinana ny maha izy azy.
Ny safidy amin'ny borosy isan-karazany dia hitondra anao hanana traikefa fanaratra hafa. Na fijaliana na rendrarendra, miankina amin'ny safidinao io.
Fitaovana borosy makiazy, Manaova borosy, Barber Shave, Faritra fiharatra, Mametraha makiazy borosy, borosy makiazy napetraka,